Xeriirkan Ayaa Ka Dhaxeeya Shaah Cabidda Iyo Cimri Dheerida | Xaqiiqonews
Xeriirkan Ayaa Ka Dhaxeeya Shaah Cabidda Iyo Cimri Dheerida
Saynisyahano ayaa soo ogaaday in shaah cabidda badan 3 mar wax ka badan todobaadkii ay qofka u horseedi karto cimri dheer iyo caafimaad.
“shaah cabka badan, waxa uu qeyb ka qaataa hoos u dhigista xanuunada ku dhaca wadnaha, faa’idada ugu badana waxaa hela dadka shaah cabidda soo waday waqti badan ” ayuu yiri Xianyan Wang oo ka tirsan akadeemiyadda caafimaadka ee Beijing.
Sida Xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay ” “European Journal Of Preventive Cardiology”, saynisyahanada ayaa tijaabo ku sameeyey daraasad ay ka qeyb galeen dad kor u dhaafay boqol kun oo qofood.
Sidoo Kale Aqri..Sidan Ayuu Shaaha U Galaa Maskaxda Dadka
Dadka daraasadda ka qeyb galay ayaa ahaa dad qabay wadno xanuun ama kansar, waxaana dadka loo qeybiyey laba koox oo kala ah, koox shaaha cabi jiray si joogta ah(ugu yaraan 3 goor todobaadkii) iyo koox shaah cabkooda yaraa(wax ka yar 3 goor todobaadkii) ama aan wax shaah ah cabi jirin, dadkani ayaa khubarada baaritaan la daba joogeen muddo dhan 73 sano.
Natiijadu waxa ay boorka ka qaaday in dadkii cabi jiray shaaha ay yaraatay halista wadna xanuunkooda 20% marka loo bar bardhigo kuwa iyaga aan cabin shaaha.
Sidoo kale 15% ayey hoos u dhacday halista ay ugu jireen in ay dhintaan, arinkaasi oo khubarada ku dhiirigeliyey in ay soo saaran gabogabo ah “shaah cabka oo ka qeyb qaata cimri dheerida”.